Doorashada soo socota hogaamiye xisbiyeedkee guul soo hoyn doona? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Rais'sal wasaaraha talada dalka haya ahna hogaamiyaha Moderatka Fredrik Reinfeldt. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix.
Doorashada soo socota hogaamiye xisbiyeedkee guul soo hoyn doona?
La daabacay onsdag 7 augusti 2013 kl 14.49
Waxaa la gaarey xilligii ay hogaamiyaasha xisbiyada qaran ee dalkan Iswedhen qaban jireen qodbadaha xagaaga. Xagaagan waxaa qodbeyn doona dhamaan hogaamiyaasha aan ka aheyn hogaamiyaha xisbiga KD Göran Hägglund. Jan Björklund ayaa axada bilaabi doona qodbad jeedinta. Sida ay muujineyso cilmi baaris; doorashooyinka Iswedhen guusha doorsho ee uu gaaro xisbiga waxaa u sabab ah xisbiga ee ma'ahan hogaamiya.
Balse taariikhada waxaa ka buuxa tusaalooyin badan oo muujinaya in ay jiraan hogaamiyaal xibigooda guul gaasiiyey ama la degey. Hada oo ay dadka Iswedhen ka soo yaraaneyso u daacad ahaanshaha xisbiya ayaa hogaamiyaasha xisbiyada kaalin weyn ka qaadan karaan kordhinta taageerada xisbigooda. Hogaamiyahii hore ee xisbiga Socialdemokratiga Mona Sahlin ayada makey bilodey xiisaha siyaasada waxaa u sabab ahaa hogaamiyahii markaas xisbiga Socialdekomratiga.
- Aniga sidaas bey ii aheyd. Waxey aheyd waxii isoo jiitey Olof Palme. Gabar yar ayaan ahaa oo aad uga xanaagsan dagaalkii Vietnam, waxaan arkey ruux sideydo oo kale uga xanaagsan arintaas. Dhowre sanno ka bacdiina waxaan kamid noqdey noqdey Socialdemokratiag ayey tiri.
Laakiin Cilmi baarista waxey badanaa muujisaa in ay tahay khuraafaad in hogaamiyaasha xisbiyada kaalinta ku leeyahiin qaabka ay codbixiyaasha u codeeyaan. Rugta afkaar aruurinta Demoskop sannad kasta waxey sameysaa baaritaano soo noqnoqda oo la xiriira kalsoonida codbixiyaasha u hayaan hogaamiyaasha xisbiyada. Maariyaaha rugtas Anders Lindholm ayaa aaminsan in saameynta hogaamiyaasha xisbiyada ay cilmi baarayaasha yareystaan.
- Dabcan wey cadahey in aan yareysano kaalinta hogaamiyaasha xisbiyada. Gaar aahan iminka oo ay is-dhintey aas'aaska xisbiyada. Aas'aasaka waxaan laga wadaa codbixiyaal markasta isku si sameeya oo ku dhisan caado iyo aqoonsi. Kuwaas hada waa yaraadeen. Marka kaalinta hogaamiyaasha ayaa ah arin micno wey leh ayuu yeri Anders Lindholm.
Xilligan oo ay yaraaneyso u daacad ahaansha xisbi waxaa micno weyn ku fadhiya kaalinta hogaamiyaasha xisbiyada.
Taarekh ahaana waxaa jira tusaalooyin faro badan oo muujinaya sida ay hogaamiyaasho ay kor ugu qaaden ama ugu dhigaan taageerada xisbigooda. Hogaamiyahii hore ee xisbiga Socialdemokratiga Håkan Juholt oo ay heysatey dhibaato la xiriirtey guri uu iibsadey iyo hadalo layaab lahaa oo uu ku hadley ayaa hoos saa'id ugu ridey taageeradii xisbiga jilaalkii 2011-2012. Kadib markii uu Bengt Westberg qabtey xilka hogaamiyinimo ee xisbiga Folkpartiet kadib doorashadii 1985 waxaa aad u kordhey taageerada xisbiga oo ka soo kacdey boqolkii 6 kaliya tagteyna boqolkii 14- taas oo keentey in laga hadlo wax la yiraahdo Westberg effekten ama saameynta Westberg. Sidoo kale Gudrun Schyman oo ayado aheyd mudo toban sanno ah hogaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet intii u dhaxeysey 1993-2003 ayaa taageerada xisbigeeda gaarsiisey heer uusan weligiis gaarin hadii ay ahaan laheyd xilligaas hortis ama ka bacdiis.
Laakiin hogaamiyaasha intee kamid ah ayaa keeney isbedel siyaasadeed oo noqotey mid raaga? Xilligii Schyman u aheyd hogaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet waxey xisbigaas ka soo leecisey afkaartii shuucinimada una soo janjeerisey arimaha femenisamka oo ah sinaanta raga iyo dumarka oo xisbiga hada ka dhigtey afkaaraha ugu waaweyn siyaasadiisa. Laakiin in aysan taas aheyn saameyn ay Schyman dhallisey waxaa u marqaati ah in aysan hormar dhanka taageerada gaarsiinin xisbiga ay hada xogheynta u tahay ee Feministiskt Initiativ oo aan illa hada ku guuldaresytey in uu ka soo muuqado gulayaasha dalka looga arimiyo.
Dhanka kalena shaqsiga Fredrik Reinfeldt ayaa kaalin weyn isna ku yeeshey xisbiga Moderatka. Reanfeldt marka uu noqdey hogaamiayaha xisbigaas waxaa guud ahaanba dib u habeynta lagu sameeyey xisbiga oo noqdey "de nya Moderaterna. Waayadii hore taageerada xisbigan waxeyd tiro haan ahaan jirtey boqolkii 20 balse marka talada loo dhiibey Reanfeldt xisbiga taagerada waxey cago cgayesey boqolkii 30. Reanfeldt waxuu muhiim u yahay xibigiisa Moderatka iyo weliba xisbiyada ay bahwadaaga yahiin ee alliansen ayuu leeyahey Anders Lindholm.
- Kaalinta hogaamiyaasha waa u mahiim xisbiyada oo dhan. Laakiin Reinfeldt kaalinta Reinfeldt muhiimad gooni ah yaye leedahey. Hadii uu liicana oo uusan sida looga bartey u wanaagsaneyn dabcan xisbiyada waxbadan ayey ku weyn doonaan, ayuu yeri.
Halka xisbiga Socialdemokratigana howlsha utaala keliya aysan aheynd sidii ay iskaga dhicin lahaayeen Moderatka iyo alliansen balse waxaa hogaamiyaha xisbiga Stevan Löfven utaala sidii uu iskaga tiirin lahaa Fredrik Reinfeldt oo ay u wado ytartamayaan xilka ra'isalwasaaraha. Saas darteed ayey kaalinta hogaamiyaasha muhiim guuni u yeelan doontaa doorashada soo socota ayuu leeyahey Tomas Ramberg oo uga faalooda laanta Ekot siyaasadaha gudaha.
- Hogaamiyaasha waxaa laga aaminsanyahay in aysan kaalin micno leh ku laheyn sida ay dadka u cadeeyaan. Laakiin su'aalaha noocaan ah waxey isku dhowyahiin su'aalsha ah sida uu xisbi u yahay mid istaahila xukunka iyo sida ay dadka ka aamisanyahiin in xisbigaas u maareyn karo siyaasada dhaqaalaha dalka. Su'aalahaasna waa kuwo xukumada hada talada heysa ay codbixiyaasha kalsooni weyn kaga heysto, arimahaas oo xisbiga Socialdemokratiga aad hada u eegayo. Laga yaabee in aysan gacanta sareyso ku yeelan waayo ruuxa talinayey sideed sanno oo isku xigta waa dabiici in uu kalsooni weyn heysto, laakiin socialdemokrtiga wey isku deyi karaan in ay u soo dhawaadaan, ayuu yeri.
Sidoo kael Mona sahlin ayaa aaminsan in kaalinta hogaamiyaasho ay muhiim u yeelan doonta sida ay codbixiyaasha u codeen doonaan doorashada soo socta. Waxeyna si gooniya u xuseysaa sadex kamid ah hogaamiyaasha.
- Midka koobaad waa Fredrik Reainfeldt iyo xisbigiisa Moderatka. Aad buu muhiim ugu yahay xisbgiisa sidoo kalena waxuu xilka wasiirka koobad u hayaa dhaaman xisbiga ganshaanbuurta. Mid ka labadna waa Stevan Löfven oo asagana ah musharaca ra'isalwasaaraha. Waa nin cusub. Kan sadexaadna waa nin aad looga jacelyahey xisbigiisa balse inta badan dadka ay nacabyahiin, waana Jimmie Åkesson hogaamiyaha xisbiga SD. Asna aad buu muhiim ugu yahay xisbigiisa. Sadexdaas hogaamiye xisbi ayaa u go'aamin doona xisbiyadooda kaalinta ay ku yeelan doonaan doorashada soo socota, sida aan maleynayo ayey tiri hogaamiyahii hore ee xisbiga Sochialdemokratiga Mona Sahlin.
Warbaxintaana waxaa diyaariyey wariye: Anders Ljungberg, SR International.